Enwere ihe omuma ngwaọrụ Amazon dị iche iche maka ndị mbido?
Amaala nke ọma na ịmepụta nyocha ọchụchọ kwesịrị ekwesị bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa nke Nchọpụta Nyocha Search (SEO) na echiche nke oge a banyere ahịa Ahịa na azụmahịa niile nke Ecommerce, na-eleghara ebe ị na-ere anya. Ụfọdụ ndị ọkachamara SEO kwuru na "ọdịnaya bụ eze. "Nke ahụ na-eme ka ọ pụta ìhè ọ bụghị nanị maka nyocha kachasị achọpụta na isi engines dị ka Google n'onwe ya, mana maka ụlọ ọrụ mbupu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla n'ịntanetị nke na-ere ahịa ere ahịa dị ka Amazon. Ka anyị chee ya ihu - ọ ga - abụrịrị ajụjụ nke ndị na - ere ahịa mbụ na Amazon chọrọ nchịkọta software karịsịa.
Ọ bụghị nanị na ị ga-anọpụ na ndị iro ahụ ma malite ịmepụta aha ha na ikikere dịka ndị ahịa na-azụ ahịa dịka ịzụ ahịa. Ihe bụ na ọ dịghị onye ọ bụla nwere ike ịnarị na njedebe nke ịgba ahịa ahịa, ọ gwụla ma a kwadoro ya na ngwa ngwa Amazon, ihe enyemaka ndị na-enye aka na ngwa ahia iji debe ndepụta ndepụta.N'ikpeazụ - iji merie igbe ịzụta ma na-anọrịrị n'etiti ihe ndị dị elu a na-achọta maka ire ere n'ebe ahụ.
Ya mere, na-atụle na isiokwu nyochaa onwe ya, yana ndụmọdụ bara uru ya bara uru, bụ n'ezie ihe dị mkpa karịa ụdị ọgaranya ọ bụla, ebe a bụ ụfọdụ n'ụzọ pụrụ iche nke ị na-ahọrọ mfe ma n'ezie na-eme Amazon Keywords software ngwaọrụ maka beginners. Olileanya na ị ga-esi mma kickstart na ha, n'ezie na-enweghị na-emefu a penny, dị ka nke ọ bụla nke ndị na-esonụ Amazon mkpokọta software ngwaọrụ dị na oghere ohere na Web, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ha nke nkiti.
O nwere ike iyi ka ọ na-enweghị ihe ọ bụla, mana ngwá ọrụ a bụ isi nke ọdụm ọdụ nke ụlọ akwụkwọ ochie ahụ SEO nwere ike na-arụ ọrụ ọbụla ọbụna ndị na-ere ahịa novice na Amazon dị ka isiokwu ngwanrọ nke na-arụ ọrụ n'ezie. Ihe bụ na ngwọta a bụ isi dị oke mkpa karịsịa maka ndị na-amalite. Karịsịa n'ihi na ngwá ọrụ a na-enweghị nchịkọta site n'ịchọ nnukwu ibu nke ụwa dị mma maka inye gị nnukwu foto nke na-egosi ihe niile ị nwere ike imeri na ọchụchọ na ogologo oge ọdụm, asọmpi ha ugbu a (ma ọ bụghị ya, lee ka okwu ndị a si dị ike maka ọkwa) , yana oke nyocha ọchụchọ maka isi isiokwu gị. O nweghịkwa mkpa ịsị na data data Google nyere ga-abụ nke kachasịsịsịsị na nke kachasị dị na ya, ebe ọ bụ na ọ bụ naanị otu ahịa (dị ka Amazon, eBay, Walmart, wdg.), ma chịkọtara site na nchịkọta ọchụchọ ọ bụla dị na Intanet.
Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke uru dị ukwuu nke Google's Keyword Planner mgbe e jiri ya mee ihe na nyocha nke ọchụchọ Amazon:
Tụlee inweta ngwaahịa gị na ndepụta ndepụta maka isiokwu ọhụrụ ma ọ bụ ogologo-search search. Nbanye niche onye ikwu, okwu ọ bụla dị na ya, ụdị ngwaahịa, ebe nrụọrụ weebụ, ma ọ bụ onye nrụpụta - na ịmeela.
Nwee nnukwu foto nke olu ọchụchọ maka ihe ọ bụla dị na ngwaahịa ma ọ bụ na-emeri njikọ ọchụchọ nke ndị ọrụ dị ndụ na-eme n'ụwa niile.
Nwee ndepụta nke isiokwu ndị dị mkpa na nke ọma echekwara nke ọma site n'inweta nghọta bara uru na ogologo-okwu na-atụ aro ozugbo. Ma echefula na Google's Keyword Planner bụ ezigbo ohere goldmine iji chọpụta ngwa ngwa ị ga-achọpụta na ị ga-achọpụta ihe ị ga-eme.e. , obodo, obodo, na mba).
N'adịghị ka ndị ọzọ na-ewu ewu Amazon keyword software ngwaọrụ, a niile-gburugburu toolkit bụ tumadi bu n'obi inye gị a kpọmkwem isiokwu nghọta - jidere ozugbo gị niche mmegide , ma ọ bụ nakọtara site na ndị kasị nwee ihe ịga nke ọma na-ere n'akụkụ ndị ọzọ na Weebụ. N'ịbụ nke nwere isi abụọ na-akwụ ụgwọ na ụgwọ zuru oke, Keyword Spy bụ ihe ngwọta dị mma maka ndị na-ere ahịa na-amalite ngwa ngwa ịkọwapụta ọchụchọ maka isiokwu ọ bụla, na-enye gị oke nkesa nke ọchụchọ ndị metụtara ya ma na-atụ aro ogologo oge niile ejikọta (nke nwere ike ịchọta LMS nhọrọ nhọrọ) ị na-atụ aro ịkwado maka.
Nke a SEO kpuchie nwere ihe nkesa ngwaọrụ nke ya, nke nwere ike ịghọ ihe ngwọta ọzọ ọ bụla ọzọ ma a bịa n'ịhọrọ aka nri Ihe nkata Amazon. N'etiti ya kasị n'akụkụ, ndị na-esonụ atụmatụ maka oke isiokwu nnyocha pụtara mara mma-eme: ogo ike estimates maka ọ bụla isiokwu, omenala kwa ọnwa search olu nnyocha, PPC mgbasa management, asọmpi nnyocha na organic okporo ụzọ analysis nke gị ahịa ndị iro.
Nkọwa nkọwa nke onwe a bụ aha nke ihe bara uru nke Amazon keyword software. Ee, Nchịkọta Isiokwu abụghị otu nnyemaaka isiokwu, mana ntanetị ọ bụla nwere ike ịchọta ọfụma na-enye n'efu maka Amazon ndị na-ere ahịa na-achọta ịchọta okwu ọchụchọ na ogologo-tail search phrases for their listings list. Ma, rịba ama na, iji kpughee ihe ụfọdụ dị oke elu ma dị egwu nke ikpo okwu a, ndị ahịa na-ere ahịa na oge Amazon ga-akwụ ụgwọ maka nsụgharị ya dị elu dị ka Keyword Tool Pro.
KwFinder Nchọpụta Ngwá Ọrụ
KwFinder bụ ngwá ọrụ ngwa ngwa Amazon ikpeazụ M ga - achọ igosi gị maka taa. Nhọrọ a ga-adịrị gị mma ma a bịa n'ịmepụta ihe ndị nwere ike ịmepụta okwu ogologo oge na ndepụta okwu ọchụchọ ndị na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa na-ebi ndụ ugbu a. KwFinder na-enye aka maka ọ bụghị naanị Amazon n'onwe ya, ma ihe ndị ọzọ na-ewu ewu ecommerce platforms (dị ka eBay, Walmart, Alibaba ụlọ ahịa, wdg.), yana ụfọdụ ndị ọzọ, ọbụna ebe ndị na-abụghị ndị na-ere ahịa, dị ka ọrụ ntanetị vidio vidio, ebe nrụọrụ weebụ nke abụọ kachasị eleta ụwa. A sị ka e kwuwe, achọpụtara m na KwFinder na-enwetakwu uru karị, karịsịa maka ọtụtụ atụmatụ mara mma dịka nchịkọta nhọrọ-dị mfe maka ngwa ngwa na-agagharị ndepụta m, na ntinye ederede ọzọ ma ọ bụghị nke a na-ejikarị mee ihe site na ntinye ederede ahazi, nhazi nke bara uru ajụjụ maka isiokwu nke ọ bụla dị mkpa, nakwa ka ọ ga-enwe ike inwe nsogbu Source .